राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी युएई जाँदा कतार रुष्ट किन ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी युएई जाँदा कतार रुष्ट किन ?
काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चारदिने औपचारिक भ्रमणको लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई गएकी छिन् । युएइको राजधानी अबुधावी प्रस्थान गरेकी राष्ट्रपती भण्डारीलाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतले विमानस्थलमा पुगेर विदाइ गरे।
युएईका राजकुमार शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी युएई गएकी हुन् । युएइसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ४० वर्ष पुगेको अवसरमा भएको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपतिले मंगलबार युएईका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग औपचारिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ ।
भेटमा दुईपक्षबीच पारस्परिक सम्बन्ध विकासबारे चर्चा हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । यता राष्ट्रपतिको यूएई भ्रमणलाई लिएर कतार रुष्ट बनेको छ ।
राष्ट्रपतिको युएई भ्रमणप्रति अर्को खाडी मुलुक कतारले कुटनीतिक च्यानलबाट असन्तुष्टि जनाएको छ। दोहास्थित नेपाली राजदूत रमेश कोइरालालाई शनिबार टेलिफोन गरी कतारी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले भण्डारीको युएई भ्रमणप्रति असन्तुष्टि पोखेको दूतावास स्रोतले बतायो।
जानकार स्रोतका अनुसार कतारले भण्डारीको भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाउनुमा दुई कारण छन्। पहिलो, कतारमाथि युएई, इजिप्ट, साउदी र बहराइनले जारी राखेको नाकाबन्दीबाट उत्पन्न खाडी संकट। दो श्रो कतारको निम्तोप्रति राष्ट्रपतिको वेवास्ता।
दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार कतारका अमिरले राष्ट्रपति भण्डारीलाई एक वर्ष अघि फेब्रुअरी महिनामा राजकीय भ्रमणको निम्ता पठाएका थिए। त्यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारीले पहिला भारत नगई आफू अन्य मुलुकको भ्रमणमा ननिस्कने बताएपछि कतार भ्रमणको लागि प्रक्रिया अघि बढेन।
राष्ट्रपति गत अप्रिलमा भारतको राजकीय भ्रमणमा गएर फर्केपछि कतार भ्रमणको तयारी गर्ने भनिए पनि जुन महिनामा कतारमाथि चार खाडी मुलुकले नाकाबन्दी गरेसँग भ्रमणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
कतारले भ्रमणको निमन्त्रणा दिएपछि युएईले भण्डारीलाई निम्त्याएको हो। तर भण्डारीले कतार नभई युएई भ्रमण नै पहिला किन रोजिन् भन्नेबारेमा सरकारी अधिकारी र राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारी खुल्न चाहँदैनन्। दोहास्थित नेपाली राजदूत कोइरालासँग कतारी अधिकारीले ‘हामीले पहिले नै दिएको निमन्त्रणा नेपालले वेवास्ता गरिरह्यो। तर हामीसँग दुस्मनी साँधिरहेको मुलुक युएईको भ्रमणमा चाहीं नेपालका राष्ट्रपति एकाएक किन जान लागेको ? ‘ भनेर सोधेको स्रोतले बतायो।
राष्ट्रपतिका बिदेश मामिला विज्ञ भट्टराईले कतार र युएईसँग नेपालको सम्बन्धको आफ्नै खाले विशेषता रहेकाले युएई भ्रमणलाई बिशुद्ध सद्भावना भ्रमणमा रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए।‘अहिले युएई राष्ट्रपति जानु भनेको कतारसंगको संबन्धलाई महत्व नदिइएको रुपमा बुझ्नु हुँदैन। हामीले कतारसँगको सम्बन्धलाई उत्तिकै महत्व दिन्छौं’ उनले भने। यसबेलाको राष्ट्रपतिको युएई भ्रमणलाई केही सरकारी अधिकारीले ‘बेमौसमको बाजा’ को संज्ञा दिएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी युएईको औपचारिक भ्रमणमा सोमबार निस्कँदैछिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आबुधाविका युवराजधिराज शेख मोहम्मद बिन जइद अल नह्यान र राष्ट्रपति भण्डारीबीच आउँदो मंगलबार द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनेछ।
तीनदिने युएई बसाइमा भण्डारी दुबई पनि जानेछिन्। राष्ट्रपति भण्डारीको यो पहिलो युएई भ्रमण हो। नेपाल र युएईबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको चालिस बर्ष पुरा भएको अवसर पारेर भ्रमण हुन लागेको राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले बताए। युएई नेपाली कामदारको लागि सुरक्षित गन्तब्य मानिन्छ। बिभिन्न क्षेत्रमा गरी युएईमा तिन लाख नेपाली कामदार छन्।
खाडीका साउदी र कतारभन्दा युएई नेपाली कामदारका लागि तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित गन्तब्य मानिन्छ। युएई नेपालको ते श्रो ब्यापारिक साझेदार मुलुक पनि हो। युएईका ब्यापारीले नेपालको जलस्रोत, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा राख्दै आएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीको प्रतिनिधीमण्डलमा आपूर्ति मन्त्री जयन्त चन्द, राष्ट्रपतिका बिदेश मामिला विज्ञ डा. मदन कुमार भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी लगायत उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी छन्।
चर्चित पत्रकार रबी लामिछानेलाई जापानको नारिता एर्पोर्टमा भव्य स्वागत
आज शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाको तेश्रो साधारणसभाको अवसरमा पत्रकार महासंघको स्मारिका ‘प्रवास पत्रकारिता-२’
नेपाल–चीन सम्बन्ध विस्तार र सम्झौता कार्यान्वयनमा भ्रमण केन्द्रित : प्रचण्ड
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो चीन भ्रमण दुई
द्रुतमार्गको डिपीआर तयार गर्न कोरियाली कम्पनी छनोट
काठमाडौँ-राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको काठमाडाँै–तराई– मधेश दु्रतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक)को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार
संविधान कार्यान्वयनको अध्याय अधुरो
काठमाडौँ नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान कार्यान्वयनको पछिल्लो अध्याय अझै अधुरो रहेको जनाएको छ ।संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानको